9-Me-BC အတွေ့အကြုံ: သင်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များသိရန်လိုအပ်သည်
RAW MT2 (MELANOTAN-II) အမှုန့်
RAW SYNEPHRINE HCL အမှုန့်
RAW LORCASERIN မှုန့်
RAW LORCASERIN HCL အမှုန့်
RAW ORLISTAT အမှုန့်
သဘာဝ Astaxanthin (472-61-7)
နေကြာဆီ (Safflower အမျိုးအနွယ်ဆီ) 83%
conjugation linoleic acids (CLA) ၉၅%
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့်
ကုန်ကြမ်းခြံဝင်း 7P အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း Nooglutyl အမှုန့်
NADP DISODIUM ဆား
walnut pepide မှုန်
QUINOA OLIGOPEPTIDE အမှုန့်
SEMEN ဆေးခြောက် OLIGOPEPTIDE အမှုန့်
Millet OLIGOPEPTIDE အမှုန့်
9-Me-BC အတွေ့အကြုံ - သင်သိထားရန်လိုအပ်သော 7-Me-BC အကြောင်းအချက်အလက်များ
စက်တင်ဘာလ 11, 2020
9-MBC ဟုလည်းလူသိများသော 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) သည်β-carboline အုပ်စုမှအသစ်သော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ β-Carbolines များသည်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသော carboline မိသားစုမှဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဇီဝမျိုးကွဲများအပြင်အချို့သောသစ်သီးများ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအသားများ၊
β-Carbolines (BCs) များကို neurotoxic အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီက 9-Me-Bc သည်အကျိုးရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 9-Me-BC dopaminergic neuroprotector သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
9-Me-BC အမှုန့်နှင့် 9-Me-BC ဆေးတောင့်များ နောကျဆကျတှဲ ပုံစံဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ nootropic ဖြစ်ပါတယ်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အကျိုးကျေးဇူးများပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခြား nootropics နှင့်မတူဘဲ 9-Me-BC သည်ကြာရှည်ခံပြီးကြာရှည်သောသက်ရောက်မှုများကိုပေးသည်။
9-ME-BC အမှုန့် - ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
9-Me-BC သည်ကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည်။ 9-Me-BC ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများက၎င်းအား၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွင်အလွန်ထိရောက်စေနိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 9-Me-BC ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများ၊
၎င်းသည် dopamine ပြိုကွဲခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်၊ ကဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ကြွဆေးများနှင့်မတူဘဲ dopamine ကိုထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အသုံးချမှုကြောင့် dopamine လျော့နည်းစေသည်။
9-Me-BC သည် dopamine လှုပ်ရှားမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံခံ၊ dendrites နှင့် synapses များကိုခွဲခြားသည်သာမကကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်သင်ယူမှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ မှတ်ဉာဏ် နှင့်သိမြင်မှု function ကို
၎င်းသည် tyrosine kinases နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေစဉ် tyrosine hydroxylase (TH) နှင့်ကူးယူထားသောဒြပ်စင်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ dopamine ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသော L-tyrosine ကို L-topa သို့ပြောင်းလဲရာတွင် tyrosine kinases သည်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
9-Me-BC သည် monoamine oxidase A နှင့် B (MAOA နှင့် MAOB) တို့ကိုတားဆီးပေးပြီး dopamine metabolisation မှ DOPAC ကဲ့သို့သော neurotoxic ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတားဆီးသည်။ ဤအရာများသည် dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်များကိုသေစေနိုင်သည်။
9-Me-BC သည် mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကွင်းဆက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အီလက်ထရွန်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်း၌အသုံးပြုသော NADH dehydrogenase ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေသည်။
9-Me-BC သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းအချက်များ (NGF)၊ SHH (Sonic Hedgehog Signaling Molecule)၊ ဦး နှောက်မှဆင်းသက်လာသည့် neurotrophic factor (BDNF) ကဲ့သို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ။ 9-me-BC သည် microglial စုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် cytokines များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်အတွင်းနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။
9-ME-BC အကျိုးကျေးဇူးများ - ၉-ME-BC Powder (Nootropic) မင်းကိုကူညီနိုင်မလား?
9-Me-BC နောကျဆကျတှဲ ကျယ်ပြန့်သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသော 9-Me-BC အကျိုးကျေးဇူးများသည်သူပြသသည့်လုပ်ဆောင်မှုများစွာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 9-Me-BC အကျိုးကျေးဇူးများ၊
i. သင်ယူမှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမှတ်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်
9-Me-BC သည်အာရုံခံဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့အာရုံခံဆဲလ်အသစ်များ၏တိုးတက်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အလွန်သော့ချက်ဖြစ်သည် မှတ်ဉာဏ် နှင့်အထွေထွေသိမြင် function ကို။
9-Me-BC ATP တိုးမြှင့် mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကွင်းဆက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နိုးကြားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်။
ကြွက်များကိုလေ့လာရာတွင် ၉ ရက်ကြာပေးသော 9-Me-BC ဖြည့်စွက်စာသည်သင်ယူမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ လေ့လာမှုအရ၎င်းသည် dopamine ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းနှင့် synapses နှင့် dendrites များတိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ii ။ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီပေးသည်
ဤအရပ်မှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်မထိခိုက်စေမီဤရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, 9-Me-BC အမှုန့်များသည်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်း cytokines များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သည်။
iii ။ လိင်စိတ်ကိုတိုးစေနိုင်သည်
9-Me-BC nootropic ဒြပ်ပေါင်းသည်အလွန် dopaminergic ဖြစ်သည်။ Dopaminergic ဒြပ်ပေါင်းများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine ပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါက dopamine လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးစေပြီး libido တိုးပွားလာတယ်။
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် 9-Me-BC စွမ်းရည်နှင့်စိတ်ဓာတ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုတို့က၎င်းသည်အားကစားသမားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိစေသည်။
9-Me-BC အတွေ့အကြုံ - 9-MBC ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
အကြံပြုထားသည့် 9-Me-BC သောက်သုံးသောဆေးသည်နေ့စဉ် 9-Me-BC ဆေးတောင့်ကိုတစ်နေ့သောက်နေသည်။ 9-Me-BC ဆေးတောင့်တစ်ခုသည် 15-Me-BC အမှုန့်၏9mg နှင့်ညီမျှသည်။
နံနက်ယံ၌ 9-Me-BC ဆေးတောင့်ကိုသောက်သုံးရန်အကြံပြုလိုသည်၊ အကြောင်းမှာတစ်နေ့တာ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်သင်လိုအပ်သည်မှာနိုးကြားမှု၊
9-MBC ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတရား ၀ င်ပါသလား။ ၉- ဘီစီအန္တရာယ်များလား။
9-MBC ကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသည်ဟုယူမှတ်သည် အစားအသောက်ဖြည့်စွက်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၉ ရက် - ဘီစီနိုotropicကို ၁၀ ရက်အုပ်ချုပ်သည်မှာလုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည်။
သို့သော်အချိန်ကြာရှည်စွာ 9-Me-BC ဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဤ 9-Me-BC nootropic နှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအလွန်ရှားပါးသည်။
ထို့ကြောင့် 9-Me-BC ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက်ဤ nootropic ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
9-Me-BC ဖြည့်စွက်ချက်သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံတိုင်းတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှအစားအစာများကဲ့သို့တူညီသောနည်းဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်၍ အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်ရောင်းချသည်။
9-Me-BC ဖြည့်စွက်စာကိုမည်သူမဆို ၀ ယ်ယူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 9-Me-BC သည်တရား ၀ င်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ခံရသော်လည်း၎င်းကိုမကျင့်သုံးမီသူတို့၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အကြံပေးသည်။
9-Me-BC ဖြည့်စွက်ဆေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသည်ဟုယူမှတ်သော်လည်း၊ သင်ကြုံတွေ့နိုင်သောအဓိကဖြစ်နိုင်သော 9-Me-Bc ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်ခုရှိသည်။
Photo-sensitivity - အသုံးပြုနေစဉ်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ရှားသင့်သည် 9-Me-ဘီစီဖြည့်စွက် ၎င်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့် DNA ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နေရောင်အောက်တွင်ရှိနေပါက 9-Me-BC ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နေရောင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
Dopamine neurotoxicity လည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်; သို့သော်သင်အကြံပြုထားသော 9-Me-BC ဆေးသောက်သုံးသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဤအရာသည်ဖြစ်ပွားသည်။ ထို့ကြောင့်အကြံပြုထားသော 9-Me-BC ဆေးသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
9-Me-BC အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေသုံးစွဲသူများမှတင်ပြသောအခြား 9-Me-BC ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာပျို့ချင်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဆိုးကျိုးများသည်အလွန်ရှားပါးပြီး 9-Me-BC ဖြည့်စွက်ဆေးကိုအလွန်အကျွံသောက်သည့်အခါတွင်သာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
9-me-bc (nootropic) မှမည်သူအကျိုးခံစားရမည်နည်း။
အခြေခံအားဖြင့်လူတိုင်းသည် 9-Me-BC nootropic မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သောလူအုပ်စုများသည် 9-Me-BC မှအခြားသူများထက် ပို၍ အကျိုးများနိုင်သည်။ အလုပ်သမားများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်အားကစားသမားများမှများစွာရိတ်သိမ်းနိုင်သည် 9-Me-BC အကျိုးကျေးဇူးများ.
9-Me-BC သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် dopaminergic ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်နှင့်သင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်လိုသောကျောင်းသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုပေးဖို့မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
အလုပ်လုပ်ခြင်းကဖိစီးမှုနှင့်ယိုစီးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကံကောင်းစွာဖြင့် 9-Me-BC သည်အလုပ်တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအာရုံစူးစိုက်စေသည့်အာရုံခံဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
9-Me-BC သုံးသပ်ချက်များကိုအသုံးပြုသူများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကောင်းသော နောကျဆကျတှဲ အားလုံးအတွက်။
9-ME-BC ရောင်းရန်အမှုန့် - 9-ME-BC ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
9-Me-BC ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရောင်းရန်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သို့သော်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များအတွက်သင်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုသေချာစေသင့်သည်။ 9-Me-BC ဆေးတောင့်သို့မဟုတ်အမှုန့်ဖြည့်စွက်ဆေးများ၏အကောင်းဆုံးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိရန်သုံးစွဲသူများထံမှ ၉-Me-BC သုံးသပ်ချက်ကိုသုံးသပ်ပါ။
အခြားဖြည့်စွက်သကဲ့သို့, 9-Me-BC အန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
9-Me-BC ကိုသုံးစွဲသူများစွာသည်၎င်းကိုအတည်ပြုပြီးမှဝယ်ယူသည် nootropics ပေးသွင်း 9-Me-BC ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
9-Me-BC ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသောအခါလျှော့စျေးနှုန်းများကိုခံစားရန်အမြောက်အများကိုရောင်းရန် 9-Me-BC ကိုကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီများမှ ၀ ယ်ပါ။
Gille G. အ, Gruss အမ်, Schmitt အေ, Braun K. , Enzensperger C. , Fleck C. နှင့် Appenroth D. (2011) 9-Methyl-b-carboline သည်ကြွက်များတွင်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်။ Neurodegen dis ၈၊ ၁၉၅ ။
Gruss, အမ်, Appenroth, D. , Flubacher, အေ, Enzensperger, C တို့, Bock, ဂျေ, Fleck, C တို့, ... Braun, K. (2012) ။ 9-Methyl-β-carboline- သွေးဆောင်သိမြင်မှုတိုးမြှင့် hippocampal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် dendritic နှင့် Synaptic ပြန့်ပွားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်, 121 (6), 924-931 ။Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713 ။ x ။
Hamann, ဂျေ, Wernicke, C တို့, Lehmann, ဂျေ, Reichmann, အိပ်ချ်, Rommelspacher, အိပ်ချ်, & Gille, G. အ (2008) ။ 9-Methyl-β-carboline သည်ပုံမှန် mesencephalic ယဉ်ကျေးမှုတွင်ကွဲပြားသော dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်၏အသွင်အပြင်ကို - ထိန်းညှိပေးသည်။ Neurochemistry အင်တာနေရှင်နယ်, 52 (4-5), 688-700 ။Doi: 10.1016 / j.neuint.2007.08.018 ။
Polanski ဒဗလျူ၊ Enzensperger C. ၊ Reichmann အိပ်ချ်နှင့် Gille G. (၂၀၁၀) ၉- မက်သိုင်း - ဘီတာ - ကာရိုဘီine၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ - ရောင်ရမ်းမှုလျော့နည်းစေသည့်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ dopaminergic အာရုံခံများကိုနှိုးဆွခြင်း၊ ဂျေ Neurochem ။ 2010, 9-113 ။
Wernicke, C တို့, Hellmann, ဂျေ, Ziêba, ခ, Kuter, K. , Ossowska, K. , Frenzel, အမ်, ... Rommelspacher, H. (2010) ။ 9-Methyl-b-carboline သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆေးဝါးဗေဒအစီရင်ခံစာများ, 19 ။
RAW 9-METHYL-9H-BETA-CARBOLINE အမှုန့် (၂၅၂၁-၀၇-၅)
2.9-ME-BC အမှုန့် - ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
၃.၉-ME-BC အကျိုးကျေးဇူးများ - 3.9-ME-BC Powder (Nootropic) သည်သင့်ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်သနည်း။
4-Me-BC အတွေ့အကြုံ - 9-MBC ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
၉-MBC ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံခြုံပြီးတရားဝင်လား။ ၉- ဘီစီအန္တရာယ်များလား။
6-me-bc (nootropic) မှမည်သူအကျိုးရနိုင်သနည်း။
7.9-ME-BC ရောင်းရန်အမှုန့် - 9-ME-BC ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
Shangke Chemical သည်တက်ကြွသောဆေးဝါးအလယ်အလတ် (APIs) ကိုအထူးပြုပြီးအဆင့်မြင့်ပညာရှင်များ၊ ပထမတန်းစားထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းအရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဓာတ်ခွဲခန်းများဖြင့်အထူးပြုအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Galantamine Hydrobromide ဖြည့်စွက်ချက် - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ဆေးကောင်းကောင်းလား။
Nootropics PRL-8-53: ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူနိုင်စွမ်းကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေသလား။
Cycloastragenol ဖြည့်စွက်: အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & သုတေသန
ခွငဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောင်းချသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကို FDA သို့မဟုတ် MHRA မှအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးပေးပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆေးကုသမှုခံယူသူ၏အကြံဥာဏ်ကိုအစားထိုးရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှပေးသောထောက်ခံစာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည် Phcoker.com ၏အမြင်များမဟုတ်ပါ။ ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်အဖြစ်ယူမှတ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်© Phcoker Inc.